Ny maha-zava-dehibe ny angovo rivotra sy ny valan-javaboary | Fanavaozana maintso
Mba hamakafakana ny maha-zava-dehibe ny angovo avy amin'ny rivotra amin'ny sehatry ny angovo manerantany dia ilaina ny manisy fiheverana ireo rohy rehetra ao amin'ilay rojo izay ilaina mba hanaovana ny firavaka amin'ny satro-boninahitra, ny turbine rivotra malaza izay mandrafitra ny toeram-pambolen'ny rivotra, biby teknolojia amin'ny fivoarana ankehitriny.
Avy eo dia hanazava ny fomba fiasan'ireto fiompiana rivotra ireto izahay Ankoatra ny manan-danja lehibe ny angovo vokarina ho azy ireo amin'ny fiainantsika, ary ho safidy iray amin'ny ho avy tsy ho ela.
1 Asa fiompiana rivotra
2 Ny maha-zava-dehibe ny angovo avy amin'ny rivotra
3 Ny toeram-pambolena rivotra lehibe indrindra any Espana dia any El Andévalo (Huelva)
4 Aiza ny Andévalo?
Asa fiompiana rivotra
Ny fanararaotana a Turbine 1 MW napetraka ao amin'ny toeram-piompiana rivotra fadio ny gazy karbonika 2000 taonina (CO2), raha ny herinaratra vokarina dia navoakan'ny zavamaniry thermoelectric.
Amin'ny alàlan'ny fiheverana ireo rohy rehetra ao amin'ny rojo, ny angovo sy ireo fitaovana ilaina samy ho an'ny famokarana Mikasika ny famongorana ireo turbin-drivotra dia azo marihina fa mahaliana ny fandanjana angovo lany.
Halalinina ihany koa ny tsingerin-taonan'ny turbinin'ny rivotra. ny Turbine rivotra 2,5 MW, miaraka amin'ny fiainana mahasoa mandritra ny 20 taona eo ambanin'ny toe-javatra iasana mahazatra, dia afaka mamokatra hatramin'ny 3.000 MW isan-taona, izay ampy ho an'ny fihinanana manodidina Tokantrano 1.000 ka hatramin'ny 3.000 (miankina amin'ny fanjifana) isan-taona. Ny fiainana ilaina amin'ny turbinin'ny rivotra dia tombanana eo anelanelan'ny 20 sy 25 taona.
Azonao atao ny manavaka a "kely " turbine rivotra (manomboka amin'ny watts am-polony vitsivitsy hatramin'ny 10 KW) izay ampiasaina amin'ny manondraka rano na manome herinaratra amin'ireo toerana mitokana, amin'ireo turbine mahery indrindra (avy amin'ny 50 KW ka hatramin'ny 5 MW) mifandray amin'ny tamba-jotra elektrika, izay ireo no mivoatra hatrany. Ity farany amin'ny ankapobeny dia tafangona indray amin'ilay antsoina eolico Park.
Saika ny turbinina rehetra mamokatra herinaratra misy rotor miaraka amin'ny lelany na lelany izay mihodina manodidina ny axis marindrano. Ity dia mifamatotra amin'ny fivorian'ny famindrana mekanika na mampitombo ary, farany, a Mpamokatra herinaratra, samy mijanona eo amin'ny lampihazo mihantona eo an-tampon'ny tilikambo.
Zava-dehibe ny manamarika izany halavany Ho tapa-kevitra ny hiteraka angovo na hafainganam-pandeha bebe kokoa na kely aza, satria lehibe kokoa ny faritra voafafa lehibe kokoa no hahatratra ary miharihary fa hamokatra a nitombo angovo.
Ny maha-zava-dehibe ny angovo avy amin'ny rivotra
Matetika ny mpanohitra ny toeram-piompiana misy rivotra any amin'ny tany mandroso dia miady hevitra momba ny fahalotoan'ny sary, ny tabatabany ary ny famokarana azy dia tsy ampy hanefana ny filan'ny angovo. ny herin'ny rivotra Tokony horaisina ho loharanon-kery vaovao, angovo madio, mivoatra ary mifameno amin'ireo karazana famokarana hafa.
Ho an'ny mahazo aina mety hiteraka izany, ho be foana izy ireo ambany noho ireo nateraky ny karazana angovo hafa toy ny, ohatra, toy ny angovo arintany na angovo nokleary.
Aza adino fa ny angovo ateraky ny rivotra sy ny fihetsiny dia angovo kinetika ka tsy mandoto azy, ary avy eo iray amin'ireo angovo madio indrindra Inona no mety ho hitantsika
Ny fanambin'ny ho avy dia mahazo loharanon-angovo mora vidy, tsy mandoto, azo havaozina ary azo idirana ho an'ny rehetra firenena eran'izao tontolo izao (sarotra amin'ny lobbies any), izay mamela ny fitaterana, ny indostria ary ny ankohonana hampihena ny fiankinan-doha amin'ny menaka ankehitriny, ary toa angovo entin'ny rivotra izany dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'io lafiny io.
Espana, maha-izy azy a mpisava lalana sy firenena mitarika amin'ny fampiasana angovo rivotra, na dia tato ho ato aza dia nijanona ny fametrahana valan-javaboary vaovao. Na izany aza, mbola afaka mirehareha isika amin'ny fananana ny fiompiana rivotra lehibe indrindra any Eropa kontinanta.
Io ilay kompania El Andévalo, izay miaraka ny 292 MW Ny herinaratra dia mihoatra lavitra ny valan-javaboary Whitelee, any Ekosy, izay mitotaly 322. Ny zavatra mahaliana dia samy manana ny orinasa iray izy ireo, ary Espaniola, Iberdrola Renovables, ary samy manana «turbines» avy ao amin'ny orinasa Basque Gamesa.
Raha tompon'ny Andévalo taona vitsivitsy lasa izay dia nanamafy ny toerany ny orinasa mpitondra angovo ny herin'ny rivotra dia ao Andalusia, miaraka amin'ny 851 MW, ary manerana an'i Espana, miaraka amin'ny 5.700 MW.
Aiza ny Andévalo?
Eo anelanelan'ny tanàna Huelva ao El Almendro, Alosno, San Silvestre ary Puebla de Guzmán, ao atsimon'ny faritanin'Andalzianina io. Ilay sarotra, izay nanomboka mihazakazaka amin'ny 2010Fambolena rivotra valo no misy azy: Majal Alto (50 MW), Los Lirios (48 MW), El Saucito (30 MW), El Centenar (40 MW), La Tallisca (40 MW), La Retuerta (38 MW) , Las Cabezas (18 MW) ary Valdefuentes (28 MW).
Raha atambatra, ny 292 MW voalaza etsy ambony, izay mamela ny famokarana herinaratra isan-taona avy amin'ity zavamaniry midadasika ity hamatsy trano 140.000 ary isaina fa misoroka ny famoahana ny rivotra iainana ny tsy misy hafa noho ny 510.000 taonina ny CO2.
Tamin'ny Febroary 2010 izy io rehefa Iberdrola Renovales naka ny fananana ilay faritra manontolo. Ny fiompiana rivotra Los Lirios no farany azony, tao anatin'ny fifanarahana fivarotana sy fividianana rivotra any Andalusia izay nosoniavina tamin'i Gamesa. Ny hetsika, izay ao anatin'ny fifanarahana nosoniavin'ireo orinasa roa ireo tamin'ny taona 2005 momba ny fivarotana fiompiana rivotra any Andalusia. ny nihoatra ny 320 tapitrisa euro ny vidiny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny maha-zava-dehibe ny angovo rivotra
ANA SPAIN dia hoy izy:
Ahoana no ahafahana mamantatra hoe aiza amin'ny faritany nametrahana ny fiompiana rivotra?
Inona avy ireo anton-javatra mamaritra ny famolavolana sy ny fametrahana azy?
Valio amin'i ANA ESPAÑA